အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဘန်နာရှင်အတွက် စပက်ဂတီ
ဖိုးစိန် June 25, 2010 at 3:18 AM
ခေါက်ဆွဲ ရ မရ စမ်းနည်းရှိတယ်။ခေါက်ဆွဲ တဖတ်ကိုဆယ်ပြီး မီးဖိုးနံရံ ကို လွင့်ကပ်လိုက် ။။ ကွာကျနေသေးရင် ခေါက်ဆွဲက မရသေးဘူး။ ကပ်နေရင်ခေါက်ဆွဲက စားဖို့ အဆင်သင့်။း)
ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရင် vegetable stock ကိုထည့်ပြုတ်... knorr တံဆိပ်က ကောင်းတယ်။ ခေါက်ဆွဲကမွှေးတယ်။
ကြက်သွန်နီနီလာရင် မှိုထည့်. ဝိုင်ထည့် .. ပြီးမှ အသားထည့် .. ပူစီနံခြောက်ထည့် .. မွှေးတယ်။ အဟဲ
စပါဂတ်တီကိုကြိုက်တယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးများများနဲ့ကိုကြိုက်တာ။ အပေါ်က ဟာလူမီ ချီစ်လေးအုပ်လိုက်... ရှလွတ်...
အသည်းမကွဲတကွဲ မျက်ရည်ရွှဲလဲနဲ့ သူက ဒီနေ့ပျော်သွားတယ်ဆိုလို့ ကျေနပ်မိပါတယ်။
Rita June 25, 2010 at 8:17 AM
Mon Petit Avatar June 25, 2010 at 10:12 AM
Waiting for နန်းကြီးသုပ်, Ygn, Mdy posts. Delighted to hear that you are now inagood mood.
wai June 25, 2010 at 10:12 AM
တီရေ မသိတာ၊ မတက်တာများရှိသေးရဲ့လား။ တော်လိုက်တာ။ ကျွန်တော်လည်း နန်းကြီးသုတ်ကိုပိုကြိုက်တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အခု 711 က စပါဂတ်တီကိုစားရင်း တီ့ပိုစ့်ကိုဖတ်နေတာ။
ကျွန်တော်ကတော့ စပါဂတ်တီမပြောနဲ့ ထမင်းကြော်တာ ထမင်းနဲ့ဆီ ဘယ်ဟာအရင်ထည့်ရမှာလဲလို့ အိမ်ကိုဖုန်းနဲ့လှမ်းမေးတဲ့ကောင် :D
khin oo may June 26, 2010 at 12:47 AM
ချစ်ကြည်အေး June 28, 2010 at 8:46 PM
တီက အကုန်တတ်တာပဲ စပက်ဂတီကြိုက်တယ် နန်းကြီးသုတ် ပိုကြိုက်တာလည်း အမှန်ပဲ၊ မန်းလေးမုန့်တီသုတ် ကောင်းကောင်း လုပ်တတ်တယ်၊ ဒါမဲ့ တီ့လို ဟင်းချက်ရင်း ဓါတ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ရိုက်ဖို့ စိတ်မရှည်ဘူး...